मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्दा फसिएला ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्दा फसिएला !
२०७१ जेष्ठ ७, बुधबार ०६:२० गते
भरतपुर । एफएम रेडियो जस्ता सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत् सहजै आफ्नो मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्ने बानी छ भने विचार पु¥याउनु होला है ! फसिन सकिने अवस्था छ । यस्तो कार्यले युवतीहरु अफ्ठ्यारो अवस्थामा समेत पुग्ने खतरा देखा परेको छ ।
स्थानीय एफएममार्फत सार्वजनिक हुने युवतीका मोबाइल फोन नम्बर सुन्न यौनदुराचारमा लाग्नेहरु पनि कान ठाडा बनाएर बस्दा रहेछन् । चितवनमा भएको एक घटनाले यो कुरा पुष्टि गरेको छ । एफएम रेडियोबाट मोबाइल फोन नम्बर सार्वजनिक गरी अपरिचितसँग मित्रता गाँस्ने रहर गरेकी एक युवती दुराचारीको चंगुलमा परेकी छन् ।
चितवन जिल्ला अदालतले सोमबार चितवन कोराक गाविस वडा नं. १ का सागर तामाङ भन्ने सिमसोम चेपाङले यौन शोषण गरेको ठहर गर्दै उनलाई दुई वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएको छ । त्यस्तै यौन शोषणमा परेको भनेर उनी विरूद्ध उजुरी गर्ने युवतीलाई पनि चेपाङले ५० हजार रूपैयाँ
क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
भरतपुरको एक एफएम रेडियोबाट सार्वजनिक भएको युवतीको नम्बर सुनेर सिमसोमले सम्पर्कको सुरूवात् गरेका थिए । अपरिचितलाई फोनबाट साथी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित कार्यक्रममा युवतीले नम्बर सार्वजनिक गरेकी थिइन् । फोनबाट सुरू भएको सम्पर्क विस्तारै भेटघाटसम्म पुगेको थियो ।
‘एक दिन फोन आयो तिमी कहाँ छौं भन्यो । म आफन्तको उपचार गराउन भरतपुरको मेडिकल कलेज आएकी थिएँ । मैले मेडिकल कलेजमा छु भने । ऊ त्यही भेट्न आयो । यसरी पहिलो पटक हाम्रो भेटघाट भएको थियो’ युवतीले अदालतमा दिएको बयानमा उल्लेख छ । भेटघाटपछि झ्याम्मिदै गएपछि सिमसोमले विहेको प्रस्ताव राख्न थाले ।
‘बिहे गर्ने मेरो चाहना थिएन । तर ऊ आफ्नो अडानमा कायम रह्यो’ अदालतमा दिएको बयानमा युवतीले भनेकी छन् । विसं. २०६९ सालको जेठ ५ गतेको भेटमा सिमसोमले पहिलो पटक विहेको कुरा गरेका थिए । त्यसपछि सोही वर्षको साउन १२ मा भएको अर्को भेटघाटमा पनि बिहेका लागि कर नै गरे । युवतीसँग सिमसोमले आफ्नो नाम सागर बताएका थिए ।
सिमसोमले नाम थरमात्रै होइन, ठेगाना पनि ढाँटेका थिए । उनले युवतीलाई आफ्नो घर इलाम भएको बताउने गर्दथे । यी सबै कुरा थाहा पाएपछि युवतीले सिमसोमका बारेमा थप बुझ्न थालिन् । त्यसपछि उनलाई सिमसोमले बिहेको आश्वासन दिएर आफूलाई यौन शोषणमात्रै गरेको पक्का भयो । युवतीले चासो दिन थालेपछि सिमसोम सम्पर्कविहीन भए ।
त्यसपछि युवतीले दिएको उजुरीका आधारमा विसं. २०६९ सालको भदौ ५ गते सिमसोमविरूद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । सो मुद्दामा सिमसोमसहित उनको सहयोगीका रुपमा असिमकुमार भन्ने प्रतिवादी रहेका छन् । असिम हालसम्म फरार छन् ।
सिमसोमको खोजीमा जुटेको प्रहरीले उनका बारेमा पत्ता लगाएको जानकारी पनि आश्चर्यजनक नै
थियो । मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसारसम्बन्धी अपराधमा मुद्दा चलेका कारण सिमसोम विसं. २०६९ सालको असोज एक गतेदेखि लम्जुङ कारागारमा रहेको तथ्य पत्ता लगाएको थियो । लमजुङ अदालतले उनलाई चितवनको नभएर लमजुङकै घटनामा थुनामा राख्ने आदेश
लमजुङको सोे अवस्था र चितवनमा दायर भएको मुद्दामा संकलित प्रमाणका आधारमा सिमसोमले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनको दफा तीनको उपदफा एक र दफा चारको उपदफा दुईको ख अनुसार यौन शोषण गरेको ठहर्ने फैसला चितवन जिल्ला अदालतले गरेको हो । सिमसोम हाल लमजुङ कारागारमा नै रहेका छन् ।